Mayelana NATHI - Aviva
Ai-viva ibilokhu ibonwa njengomunye wabakhiqizi abahamba phambili befenisha yangaphandle eChina kule minyaka engama-22 edlule. Lokhu okuhlangenwe nakho okude kunika wonke amaklayenti isiqiniseko sokuthi imikhiqizo ka-Aviva ingekhwalithi ephezulu, inesitayela ngokwedlulele futhi ihlala isikhathi eside ngokumangazayo.
Ngemitha eyisikwele engaba ngu-8000 yendawo yokukhiqiza nabasebenzi abangaphezu kuka-50 abasebenza efektri, ifenisha yensimu engaphandle i-Aviva ingumnikazi futhi isebenza ngezindawo zayo zokukhiqiza, ikhiqiza ikhwalithi ephezulu, ifenisha ye-All-Weather ngamanani aqondile asefektri.
Ifektri yethu idume ngokukhiqiza amasethi wokudlela we-aluminium, amasofa ekhoneni, amasethi osofa, izihlalo zezintambo, isisekelo setafula netafula ngaphezulu kokubili ngaphandle nangaphakathi. Ngabakhiqizi abaningi befenisha engadini emakethe, kungaba nzima ukwazi ukuthi ngubani umkhiqizi onokwethenjelwa okhiqiza ifenisha yangaphandle esezingeni eliphakeme noma labo abakhiqiza ifenisha eshibhile engakhelwe ukuhlala isikhathi eside.
Sisebenzisa kuphela okokusebenza okungcono kakhulu okwelukwe ngesandla kuzungezwe amafreyimu ozimele we-aluminium weqoqo langaphandle lefenisha, ngenkathi sisebenzisa amakhushini asezingeni eliphakeme ngesihlalo esenziwe nge-aluminium kanye nokuqoqwa kosofa. Lokhu kukuvumela ukuthi ushiye ifenisha ngaphandle unyaka wonke ngaphandle kwengozi yokulimala kwesimo sezulu. Lokhu kufaka ukuvikeleka esimweni sezulu esibandayo, ukuqinisekisa ukuthi i-rattan ayiqhekeki noma iphihlizeka, naselangeni ukuqinisekisa ukuthi ifenisha ayibuni.
Ifenisha ye-patio yangaphandle ye-Aviva ihlose ukuletha ukubukeka okusha okusetha okwenziwe ngendawo enobungani kanye nezinto ezinhle kakhulu. Sithenga, sicubungule futhi sihlole zonke izinto zokusetshenziswa endlini ukuze sazi ukuthi yini engaphakathi kwemikhiqizo yethu.
Sisebenzisa izingcweti nabesifazane abanekhono lokulawulwa kwekhwalithi. Amaphoyinti wokuhlola ikhwalithi aqinile akhona esigabeni ngasinye somkhiqizo ngokufaka, ukuqinisekisa ukuthi izimpahla zakho zifika zisesimweni esihle kakhulu.
Ifenisha yangaphandle ye-Aviva iza nesiqinisekiso seminyaka emithathu esenelisa amakhasimende ayo avela emhlabeni wonke, ikakhulukazi amaklayenti avela e-UK, e-USA, e-Australia, eCanada, eFrance, e-Italy naseTurkey. Siphinde sihlangabezane nezidingo ezisezingeni eliphakeme zabathengisi abakhulu abavela e-Amazon.
Ikheli Lemboni: Vimba uB, Flat Lonke, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Zone, Foshan, Guangdong, China
Ucingo: 0086-757-8226 3754